ဦးဝင်း 10 Pro ကို
ဦးဝင်း7Pro ကို
ဦးဝင်း 8.1 Pro ကို
Office 2013 ကို
Office ကို 2016
Office ကို 2019 ခုနှစ်
MAC များအတွက် Office ကို
တစ်ဦးက Quote ကိုတောင်းဆို
Office ကို 2016 Std
က MS အွန်လိုင်း Activite ထံမှ● 100% မူရင်း, ဥပဒေရေးရာသော့ချက်
●အပြီးအပိုင်အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုသော့ချက်များပိတ်ဆို့ခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလို
●စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် USA တွင်လုပ်ခဲ့ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ချင်သမျှပြုနိုင်သည်
ငွေပေးချေမှုရမည့်: T / T, Wu
လက်မှတ်: က MS Partner
ဘာသာစကား: အင်္ဂလိပ် / ကိုးရီးယား
ထုပ်ပိုး: FPP လက်လီ
Microsoft က Office ကို 2016စံအိုင်ယာလန်မူရင်း 1User 1SP တပ်ဆင်ခြင်း DVD ကိုနှင့် Key ကိုကတ်
Key ကိုစကား: ရုံး 2016 စံ, 2016 စံ,
ယူအက်စ်အေ / ဟောင်ကောင် / စင်္ကာပူ / အိုင်ယာလန်
Office ကို 2016 စံ 1SP DVD ကို * 1
ငွေပေးချေမှုရမည့် & သင်္ဘောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ:
အသက် 30 အပိုင်းအစ
100, 000 PCs / လ
Microsoft Office 2016 စံအိုင်ယာလန်မူရင်း 1User 1SP တပ်ဆင်ခြင်း DVD ကိုနှင့် Key ကိုကတ်
Microsoft Office 2016 သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ဖို့သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့် - အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးနှင့်မည်သူမဆိုအတူ။ အဆိုပါဂန္ desktop ကိုပလီကေးရှင်းအသစ်ခေတ်သစ်ဗားရှင်း, Word, Excel, PowerPoint Outlook နဲ့နဲ့ OneNote တို့ပါဝင်မှာ, အများဆုံးကုန်ထုတ်စွမ်းအားအဘို့တည်နေကြတယ်။ သငျသညျလျင်မြန်စွာသင်သည်သင်၏အချက်အလက်များ၏အများဆုံးလုပ်ကူညီဖို့ရန်, ကြွယ်ဝသောအာဏာပိုင်များ features တွေနှင့်အတူ pixel-စုံလင်သောအပြင်အဆင်များနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင် tools တွေကိုအဘို့ဒီဇိုင်းထိန်းချုပ်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာရွက်စာတမ်းများထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုသင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသင့်အနေဖြင့်မိုဃ်းတိမ်၌သင်၏အစာရွက်စာတမ်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများအွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းထားမှုနှင့်အတူကတူညီတဲ့ page တွင်သင့်ရဲ့အဖွဲ့ရရှိရန်လွယ်ကူသည်။ ပစ္စုပ္ပန်နှင့် suite ကိုဖြတ်ပြီးအဖွဲ့ကိုပူးပေါင်း tools များ built-in အတူစီမံကိန်းများအပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ဝေမျှမယ်။
Processor ကို: 1 gigahertz (Ghz) ​​သို့မဟုတ် SSE2 နှင့်အတူပိုမိုမြန်ဆန် x86 သို့မဟုတ် x64-bit Processor
Operating System ကို: Windows7ကိုသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း Windows Server 2008 R2, သို့မဟုတ် Windows Server ကို 2012 ခုနှစ်,
မှတ်ဉာဏ်: 1 GB RAM (32 bit နဲ့);2GB RAM (64 bit)
Hard Disk ကိုအာကာသ: 3.0 GB ကိုရရှိနိုင် disk space ကို
display: 1024 × 576 resolution နဲ့
ဂရပ်ဖစ်: ဂရပ်ဖစ် hardware acceleration ကိုတစ်ဦး DirectX 10 နဲ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်လိုအပ်ပါတယ်
multi-touch နဲ့: တစ်ဦးက touch-enabled device ကိုမဆို Multi-touch လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်အားလုံး features တွေနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတစ်ဦးကီးဘုတ်, မောက်စ်သို့မဟုတ်အခြားသောစံနှုန်းသို့မဟုတ်လက်လှမ်းရိုက်သွင်းရေးကိရိယာကို အသုံးပြု. အမြဲရရှိနိုင်ပါသည်။ အသစ်ကထိတွေ့ features တွေ Windows 8 ကိုသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအတူအသုံးပြုမှုအတွက် optimized ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
အပိုဆောင်းလိုအပ်ချက်များ: အင်တာနက်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်သည်။ Microsoft account တစ်ခုလိုအပ်သည်။
ကျနော်တို့ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့စျေးကွက်အတွက်စျေးပေါ, ညံ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကလှည့်ဖြားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်, သင်ကောင်းတစ်ဦး, တည်ငြိမ်, မူရင်း key ကိုရှာဖွေနေခဲ့ကြကြောင်းကိုငါသိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများအားလုံးက MS မှတစ်ဦးအာမခံမဟုတျဘဲတကသော့နှင့်ထရောအတုသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဖောက်သည်များ၏အကျိုးစီးပွားပျက်စီးမည်မဟုတ်ပါဒါကြောင့်ထုတ်ကုန်ဖောက်သည်ကိုဝယ်ခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်တိုင်းဖောက်သည်အပြည့်အဝ, ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်စေရန်။ ဒါ့အပြင်စာဖတ်ခြင်း၌သင်တို့၏သည်းခံခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်စကားများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျနိုငျမျှော်လင့်ပါတယ်, သင်တို့ကိုငါအကောင်းတစ်ကော်ပိုရိတ်မိတ်ဖက်ရလိမ့်မယ်ယုံကြည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်လိမ့်မည်။
ယခင်: Office ကို 2016 HB
နောက်တစ်ခု: Office ကို 2016 HS
>> ပိုပြီး View
Office ကို 2016 HS
Office ကို 2016 HB
Office ကို 2016 Pro ကို
MAC များအတွက် Office ကို 2016